Archive du 20200520
Fianam-pirenena Miantso fihavanana ny CFM
Nitondra ny heviny mahakasika ny fiainam-pirenena amin` ny ankapobeny ny filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (CFM) tamin` ny alalan` ny filohany omaly.
Tanànan'i Mahajanga Milamindamina amin'ny ankapobeny
Na dia nanaitra ny mponin'i Mahajanga tokoa aza satria tsy nampoizina ny fahenoana tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity fa nahitana trangana tsimokaretina covid-19
Fatin-dehilahy nihantona Potika tsy nisy nahafantarana azy ny endriny
Lehilahy iray no hita faty tao amina tranon'olona ao anatin’ny fanamboarana tao amin' ny Kaominina Ambanivohitra Antanambao distrikan’Antsirabe II. Raha ny fahitana azy dia toa nanato-tena,
Mpitatitra zotra nasionaly Hanao hetsika goavana anio
Hitokona avokoa ireo mpitatitra amin’ny zotra nasionaly miazo an’i Toamasina, sy Mahajanga ary Antsiranana anio Alarobia 20 May.
Kidnapping Voasambotra tany Kaomoro ilay naman'i Lama
Voasambotra tany Kaomoro ny alahady 17 mey lasa teo ilay karana antsoina hoe Dilavarhoussen Reza Mamod izay nambaran'ny Zandary fa naman’ilay jiolahy mpamerin-keloka ikoizana,
Manjakandriana Efa tafiditry ny Coronavirus ihany koa
Tao anatin’ny herinandro dia tranga mampiahiahy 3 tamina kaominina telo samihafa ao amin’ny Distrikan’i Manjakandriana, araka ny tatitra nataon’ny Depiote Doda Andriamiasasoa.
Toamasina Tsy misangy ny polisy
Hentitra ny Polisim-pirenena ao Toamasina manoloana ireo olona mbola minia mandika ny lamina napetraka ho fiarovana azy ireo amin'ny fiparitahana ilay valan'aretina Covid-19, raha ny fampitam-baovao avy amin’izy ireo.
Ady amin` ny coronavirus Aleo hisokatra ho an` ireo hery rehetra
Ady iombonana ny coronavirus izany. Na inona inona resaka atao, na inona na inona disadisa politika sy tsy fitoviam-pijery dia tokony hifanolo-tanana, hiaraka hisoroka izay azo sorohana, hiaraka hanohana sy hitsabo izay efa marary ny rehetra.
Ady amin` ny Covid-19 “Mifanimpy baolina izy mianakavy”
“Diso paikady hatramin` ny voalohany ny fanjakana teo amin`ny fametrahana rafitra.